ChiGerman, Germany NezveTurkey Channel kuGerman - GERMAN
NezveTurkey Channel kuGerman
« : Kurume 08, 2015 pa03: 39: 23 pm »
MuGerman, tanga tichiisa antenna inopisa kuti tione maTurkey chiteshi, asi pane gumi chiteshi pane tambo TV, iyo inorambidzwa muchivako chatinogara. MaEuropean chiteshi Ndinoda kuva nemimwe migero. Kadii kadhi rinogona kuiswa zvimwe. Ini ndaikumbira shamwari neruzivo kuti ndibatsire.
Re: Nezve Chiteshi cheTurkey kuGerman
« Reply #1: Kurume 08, 2015 pa06: 05: 15 pm »
Pane chinoitika chinonzi IP TV. Internet ndizvo zvese zvaunoda.
Pano iwe unogona kunzwisisa kuti iyo system inoshanda sei. Asi ini zvakare ndakanzwa kuti kune mamwe makambani eTurkey kuGerman kunze kwekambani iyi. Unogona kuwana kunyoreswa kwemutengo unodhura zvakanyanya. Unofanira kutsvaga.
« Reply #2: Chikumi 07, 2015, 03:39:35 pm »
kana hama yangu aine smart tv, kana imba yake ichikurumidza pasamsung kana lg internet (min 16 mb kumhanya kwakaringana kutarisa pasina kunamira)
Unotarisa pasina matambudziko.
Iwe unomiririra iyo usb uye uikandire iyo faira yacho, wobva wadzima terevhizheni uye nekudzima, inouya muzvirongwa otomatiki, unogona kutarisa mkvod kubva ipapo,
TV akateedzana mafirimu anorarama chiteshi, hd chiteshi.
Pane mirairo pane saiti yandinotumira.
uye "regai nditaure kuti mamwe makoronyera ari kuita maitiro aya sekunge vari kutengesa ip tv ye120 euros. Pane zvakatumirwa padandemutande. Usanyengerwa, usabhadhara mari pasina."